Fikarohana momba ny firaisana Tranom-pitaovam-piadanana ao amin'i Georges George Wilkins | Edgar Mitchell - Mpanorina ny Institute of Noetic Sciences (IONS) - Fikarohana momba ny vatana teraka
Tranom-pitaovam-piraisana vaovaon'ny Sir George Hubert Wilkins | Edgar Mitchell - Mpanorina ny Institute of Noetic Sciences (IONS)
Antony natolotr'ilay: Walter Semkiw, MD amin'ny 10 / 28 / 11
Ny mpamaky Sir George Wilkins dia manao fanandramana amin'ny telepathy avy any Alaska mankany New York
Raha nandeha fiaran-dalamby avy any Liverpool aho tany Londres, dia namaky aho Dr. Larry Dossey's boky mitondra ny lohateny Ny herin'ny teny fanombohana. Misy toko iray mitondra ny lohateny Amin'ny toerana sy ny ora: Ny mpikaroka roa dia mandinika ny fetran'ny fanonerana. Ao amin'ity toko ity dia mamaritra ny fomba fitenin'ny teratany Aostralianina izy Sir George Hubert Wilkins dia mahery fo iray tena izy, izay olona voalohany nanidina fiaramanidina iray nanerana ny gorodona mirenireny tany avaratra amin'ny 1928, ary izy koa dia mahery fo sady mpahay siansa.
Wilkins dia nihalehibe aborigine people ary nahatsikaritra izy fa toa tsy nahavita "nahalala zava-nitranga iray izay tsy nahitan'izy ireo ny sofiny sy ny sofiny" izy ireo. (1) Rehefa nanao fanafahana an'i Alaska i Wilkins, dia nanapa-kevitra izy raha afaka mandefa hafatra telepaha mpiara-miasa amin'i New York Harold Sherman, izay saro-pady sy mpanoratra.
Nandritra ny fe-potoana nandritra ny volana 6, Wilkins dia nanoratra hetsika fisehoan-javatra nitranga tany Alaska ary niezaka ny handefa hafatra hafahafa ho an'i Sherman momba ireo tranga ireo. Nahazo fahatsapana i Sherman, avy any Wilkins, ary nanoratra azy ireo. Raha nisy mpandinika mahaleo tena nifanitsy tamin'ny sora-tànana nosoratan'i Wilkin ho fanehoana an-tsoratra nataon'i Sherman, dia hita ny taratasy fangatahana 60%, izay ahitana zavatra marobe maromaro mifanandrify.
Ny fiainana any amin'ny fiainana: Ilay mpamonjy entana Edgar Mitchell dia manana fanandramana amin'ny telepathy avy any ivelany mankany an-tany
Nanazava izany i Dr. Dossey Edgar Mitchell, izay mpanamory fiaramanidina mpiady fiaramanidina misotro ronono ary mpampita vaovao amerikanina, dia nanavao ny fanandraman'ny telepatie an'ny Wilkins sy Sherman.
Raha i Edgar Mitchell no nanao ny pilotan'ny lunar Apollo 14, dia nanao fanandramana izy nanandrana handefa hafatra hafahafa momba ny laharana nomena avy any amin'ny habakabaka ho an'ny mpanome ny olombelona eto an-tany. Nahomby ny traikefa.
Tao amin'ny bokiny, Dr. Dossey dia naneho hevitra fa ny fanandraman'i Wilkins avy any amin'ny Arctic any New York, miadidy ny 3400 miles, dia novelabelarin'i Edgar Mitchell, izay mandefa hafatra teleskaopy manerana ny 200,000 miles avy eny amin'ny habakabaka.
Miharihary avy amin'ny fikarohana momba ny fiterahana indray ny hoe ny tsirairay dia mamerina ny talenta, ny lamina ary ny fitondrantenany mandritra ny androm-piainany. Noho izany dia voajanahary ny fanombanana fa i Edgar Mitchell no fananganana indray ny mari-pahaizana Sir George Hubert Wilkins. Ny fikarohana fanao amin'ny vatana dia mampiseho koa fa ny olona tsirairay dia manana endriny mitovy endrika amin'ny fiainana mandra-pahafaty. Raha nandeha tany amin'ny Virgin fiaran-dalamby avy any Liverpool mankany Londres, nampiasa Internet aho raha hijery raha toa mitovy amin'i Wilkins i Edgar Mitchell. Hitako fa mitovy ny endriny amin'ny endrika ivelany.
Endrika ivelany: I Edgar Mitchell dia maneho fijery miavaka amin'ny Sir George Hubert Wilkins.
Innate Talent: Mpiloka mpisava lalana i Wilkins, mpiady mahery, mpahay siansa ary mpitsabo tany amin'ny telepatia. Edgar Mitchell dia misotro ronono marary efa misotro ronono, mpitsabo aretin-dry Apollo, nahazo diplaoma avy amin'ny Massachusetts Institute of Technology (MIT) amin'ny sehatry ny asam-piaramanidina sy ny astronautika, mpikaroka telepatia sy mpanorina ny Institute of Noetic Sciences (IONS), izay manolo-tena amin'ny fahalalana tsara kokoa toy ny fahatsiarovan-tena, telepatia sy psychokinesis.
Fiovam-pirenena: Teraka tany Aostralia i Wilkins, fony i Mitchell dia teraka tany Etazonia. Ny fahatakarana fa afaka manova ny zom-pirenena, ny fivavahana ary ny fifandraisan'ny foko avy amin'ny androm-piainany mankany amin'ny iray hafa dia afaka manampy amin'ny famoronana tontolo milamina kokoa, satria ny ankamaroan'ny ady dia mifototra amin'ny fahasamihafana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo.
Fifandraisana vaovao navaozina tamin'ny nateraky ny fanambadiana: Sir George Hubert Wilkins, izay maty tao 1958, niasa niaraka tamin'i Harold Sherman tamin'ny fanandraman'ny telepatia. Niara-niasa tamin'i Edgar Mitchell ihany koa i Harold Sherman ary toy izany, ny fanahin'i Wilkins | Niara-niasa tamin'i Harold Sherman i Mitchell tamin'ny fihodinana faharoa.
Ny fihenam-bidy: Maty tamin'ny 1958 i Wilkins, raha mbola teraka tao amin'ny 1930 i Edgar Mitchell. Noho izany, ny androm-piainan'i Wilkins sy Mitchell dia efa nihoatra ny 28 taona, izay mitovy amin'ny fehin-kevitra nasehon'ilay raharaha momba ny fisarahana. Penney Pierce.
1. Dossey, Larry: Ny Herin'ny Premonitions, ny Penguin Group, 2009, p.46